Memoirs nke geisha: onye dere ya, ihe banyere | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
El Memoirs nke geisha akwukwo Ọ bụ nnukwu ihe ịga nke ọma mgbe onye edemede bipụtara ya, ruo n'ókè na ọ nọgidere bụrụ otu n'ime akwụkwọ kachasị ere ahịa ruo afọ abụọ, akwụkwọ ọgụgụ ole na ole rụzuru.
Ọtụtụ bụ ndị gụrụ ya ma ju ha anya na ụfọdụ omume ndị mere na ụmụ agbọghọ na otu ha si arụ ọrụ ahụ, ruo n'ókè nke na-agbarịta ụka, ọkachasị n'ihi onye ha tụkwasịrị obi kacha dee ọrụ ahụ. Ma gịnị ka ị maara banyere akwụkwọ Memoirs of a Geisha? Ọzọ anyị ga-ekwu maka ya na ihe niile ị nwere ike ịchọta.
1 Gịnị bụ akwụkwọ nke Memoirs nke Geisha banyere
2 Gịnị bụ ihe odide na Memoirs nke Geisha
3 Olee otu esemokwu dị n'akwụkwọ ahụ
4 Enwere akwụkwọ ọzọ ma emesịa?
5 Ihe nkiri mmegharị nke Memoirs nke Geisha
Gịnị bụ akwụkwọ nke Memoirs nke Geisha banyere
Ihe mbu i kwesiri ima banyere akwukwo Memoirs of a Geisha bu na o bu akwukwo no na akuko. A na-akọ akụkọ ndị mere eme n'ezie, mana n'otu oge ahụ chepụtara echepụta. Ma nke ahụ bụ onye edemede, Arthur Golden, nyochara ihe karịrị afọ ise na-agba ajụjụ ọnụ geisha dị iche iche, ụfọdụ n’ime ha nyere akwụkwọ karịa ndị ọzọ. N'ihi ya, o chepụtara akụkọ ifo na-adabere n'ọnọdụ ndị nwere ike ịbụ ihe dị adị, na-edebe ya na Kyoto tupu ntiwapụ nke Agha IIwa nke Abụọ.
Na akwụkwọ edemede ewebata anyi na Chiyo, nwa agbogho onye nma ya di n'anya ya. Ya na ezinụlọ ya bi na Yoroido ma nwee nwanne nwanyị. Nsogbu bụ na, mgbe nne dara ọrịa, nna enweghị ike ilekọta ụmụ agbọghọ ahụ, wee mechaa resị ha onye ọchụnta ego bi na mpaghara.
Chiyo kwenyere na nkuchila ya, mana n'oge na-adịghị anya ọ matara na a nabataghị ya, wee kuru ya gaa n'ụlọ geisha na Kyoto, n'okpuru nlekọta nke mama m. N'ebe ahụ, ọ na-amalite dị ka onye na-eje ozi na-agbaso iwu Hatsumomo na, mgbe o nwere oge, ọ na-aga ụlọ akwụkwọ geisha.
Ma, Hatsumomo hụrụ ya dị ka onye na-ama ya aka, ma gbalịa iwepụ ya n'ụzọ ọ bụla ka ọ ghara ịbụ geisha. Mana ntụgharị uche nke akara aka mere Chiyo ka ọ bụrụ onye na-amụ ọrụ nke Mameha, Gion kachasị nwee nsogbu, nke a na-akwadebe ya ka ọ bụrụ geisha kachasị mma. Iji mee nke a, ọ na-amalite ịgbanwe aha ya na Sayuri.
Anyi agaghi ekpughere nke ozo, ma i kwesiri iburu n’uche na akuko Chiyo siri ike n’amaokwu ufodu ma na o na eme onye na-agu ya oge n’adighi nma mgbe ha zutere ha.
Gịnị bụ ihe odide na Memoirs nke Geisha
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na akwụkwọ Memoirs of a Geisha a na-akuko ya dika odi n’akwukwo, eziokwu bu na onwere odidi di iche iche ige nti. Ndị bụ isi bụ:
Chiyo. Ọ bụ onye a na-atụghị anya ya, onye a na-ahụ ka ọ na-eme n'akụkọ ihe mere eme.
Hatsumomo. Chiyo ndorondoro. Ọ mara ezigbo mma ma nwee ihe ịga nke ọma, mana ịkpọasị ya, ekworo na mpako mechiri ya anya ruo n’ịkpacha atụmatụ ọ bụla iji gbochie onye ọ bụla ịnọ n’elu ya.
Ugu. Ọ bụ enyi mbụ Chiyo mgbe ọ bịarutere n'ụlọ geisha. O nwere nnukwu ihe ịga nke ọma na obere oge, nke Hatsumomo nyere aka mee ka ọ pụọ na Chiyo.
Mameha. Ọ bụ onye ọzọ geisha, nke kachasị mma na mpaghara ahụ, ma nwekwaa nnwere onwe nke ya site n'inwe onye pịa nke na-akwụ ụgwọ mmefu ya (nwoke na-akwụ ya ụgwọ).
Onye isi ala. Aha ya bụ Iwamura Ken na ya na Chiyo nwere ọtụtụ nsogbu. Maka ya ọ bụ ihe kpatara ị ga - eji geisha.
Ọchịagha Tottori. Ọ bụ ọkpụkpọ mbụ nke Chiyo (Sayuri).
Olee otu esemokwu dị n'akwụkwọ ahụ
Memoirs nke Geisha bu akwukwo n’egosiputaghi ogwu, ndu nwata nwanyi site na mgbe ezin’ulo “rere ya” rue mgbe o gho geisha. Otú ọ dị, nke a abụghị akụkọ ifo kpamkpam, kama ọ dabere na ahụmịhe ụfọdụ ụmụ nwanyị gwara onye edemede ya, Arthur Golden. Otu n'ime ha bụ Mineko Iwasaki bụ onye kacha mara akwụkwọ akụkọ a, n'ihi nke a, mgbe ebipụtara ya, ọ katọrọ ya n'ihi na ọ mebiri nkwekọrịta onye edemede ahụ (dịka Iwasaki si kwuo, o kwere nkwa na ya agaghị ama aha ya, n'ihi n'ihi na e nwere koodu ịgbachi nkịtị n'etiti geisha na imebi ya bụ nnukwu iwe).
Ọzọkwa, n'okwu Iwasaki, akwụkwọ bụ́ Memoirs of a Geisha kwuru na geisha bụ nanị ndị akwụna nọ n'ọkwá dị elu, mgbe n'ezie ọ bụghị. Ọ bụghị eziokwu na ndị nne na nna Iwasaki rere ya na geisha ma ọ bụ na a na-ere ahịa nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ka ọ bụrụ onye na-ere ahịa kacha elu.
Ekpebiri esemokwu a na nkwekọrịta na-abụghị ikpe n'etiti onye edemede na geisha maka ego ole na-egosighi.
Enwere akwụkwọ ọzọ ma emesịa?
Enwere akwụkwọ ndị yiri Memoirs nke Geisha, mana ọ bụghị dị ka akụkụ nke abụọ nke nke a. Ugbu a, mgbe ikpe ahụ nke Mineko Iwasaki nwere, ọ bipụtara otu akwụkwọ, akwụkwọ akụkọ ndụ nke ọ na-agwa akụkọ eziokwu banyere ihe geisha dị. Aha ya bụ Ndụ nke Geisha ma bipụtara ya na 2004.
Ihe nkiri mmegharị nke Memoirs nke Geisha
I kwesịrị ịma na akwụkwọ ahụ, mgbe ọ gachara nke ọma na ahịa, bụ ebumnuche nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na -emepụta ihe chọrọ iji ya buru nnukwu ihuenyo. Ha wee nwee ihe ịga nke ọma.
Mmegharị nke akwụkwọ ahụ, nke aha ya bụ otu, gosipụtara akụkụ ụfọdụ nke ihe a gwara n'akwụkwọ ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ha niile, ma gbanwee ụfọdụ iberibe akwụkwọ n'ihe metụtara ezigbo akụkọ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, otu n'ime ihe nkiri kachasị egwu na fim ahụ gụnyere ọkụ, mgbe ụlọ Sayuri gbara ọkụ mgbe ya na Hatsumomo sere okwu, ọ gazịkwa ihu ọma ma nke a gachaa. N'akwụkwọ ahụ, ọdịda ahụ na-adị nwayọ nwayọ, naanị na njedebe ka Mameha na Sayuri nyere ya ntinye ikpeazụ, na-eme ka ọ bụrụ akwụna (na fim ọ na-apụ n'anya).
Agbanyeghị, ọ gara nke ọma wee mee akwụkwọ a onye ọrịre ọzọ ọzọ nwa oge.
N'ihi nke a, anyị na-atụ aro mgbe niile ịgụ akwụkwọ ahụ n'ihi na ọ na-enye ọhụụ, oge ụfọdụ dị iche na nke a hụrụ na telivishọn (ma ọ bụ na sinima).
Gụọla Memoirs nke akwụkwọ Geisha? Kedụ ihe ị chere maka ya? Anyị ga-achọ ịnụ echiche gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Memoir akwụkwọ nke geisha
Claudio Rodríguez. Afọ ncheta ọnwụ ya. Eke